8th November, 2020 Sun ०७:५०:४० मा प्रकाशित
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - ‘कसले गर्‍यो पार्टी फुट्ने कुरा ? मैले ?’ विशेष अन्तर्वार्तामा शनिबार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँहरूले नै अलि अगाडि पत्रकार सम्मेलनै गरेर जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार होऔं भनेको होइन ? मैले भनेको हो र ? जुनसुकै परिस्थितिका लागि तयार होऔं भनेको के ? पार्टी फुट्न सक्छ भनेको होइन र ?’